You searched for mahatoky - Page 2 sur 4 - FJKM Amparibe Famonjena
Résultats de recherche pour : mahatoky
Publié le 1 août 2020 7 août 2020
Alahady 02 Aogositra 2020
ALAHADY 02 AOGOSITRA 2020 Alahadin’ny sampana DORKASY “Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino” Alahady faha valo manaraka ny trinité, Alahady voalohany hibanjinantsika ny hevitra hoe « MAHATOKY HATRAMIN’NY FAHAFATESANA NY MINO » . Fotoana izay mbola voasokajy anatin’ny fihibohana ka fanompoam-pivavahana tanterahina amin’ny horonontsary no arahintsika, Ny Litorjia tamin’ny endriny faharoa no nentina nanatontosana ny fanompoam-pivavahana Ny filohan’ny …
Continuer la lecture de « Alahady 02 Aogositra 2020 »
ALAHADY 19 JOLAY 2020 Alahadin’ny Vondrona Fototra Laika (VFL) “Ambarao ny fahafahana ao amin’ny Tompo” Rajaonarison Rivo, Filohan’ny VFL Amparibe no nitarika ny litorjia androany noho ny ivon’ny herinandrom-bokatry ny sampana. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA Taorian’ny feon-javamaneno dia niroso tamin’ny fiarahabana apostolika ny mpitarika. Notanterahina ny fisaorana sy …
Continuer la lecture de « Alahady 19 Jolay 2020 »
Tsianjery : “Dia nandeha izy ka nitory eran’ ny tanàna izay zavatra lehibe nataon’ i Jesosy taminy.” (Lioka 8: 39b) Efa tanterak’i Kristy ny fanafahana antsika tamin’ny asam-pamonjena lehibe namoizany ny ainy teo amin’ny hazofijaliana. Isika anefa ve tena te ho afaka amin’ny gadra rehetra mamatotra antsika? Koa raha ny Zanaka no hanafaka anareo, dia ho …
Continuer la lecture de « Jolay 20>AMBARAO NY FAHAFAHANA AO AMIN’NY TOMPO »
SABOTSY 06 SY ALAHADY 07 JONA 2020 « Mihavàna ao amin’ny Tompo » « Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; eny, aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. » (Jaona 13:34) Ny fotoana voalohany tamin’ny 7 ora no nakana izao tatitra izao. Ramilison Diamondra, Mpitandrina no nitarika raha Raharijaona …
Continuer la lecture de « Sabotsy 06 sy Alahady 07 Jona 2020 »
Sabotsy 16 sy Alahady 17 Mey 2020
SABOTSY 16 SY ALAHADY 17 MEY 2020 Ivon’ny Jobily faha-50 taonan’ny Antoko-Mpihira Hasin’ny Famonjenam « « Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana … maharitra mandrakizay ny fiderana Azy » (Salamo 100 : 2, salamo 111 : 10b), Alahady 17 May 2020, Alahady natokan’ny foibe Fjkm hitondra am-bavaka ireo mpiasa ao aminy nefa Alahady ihany nitsingeranan’ny faha …
Continuer la lecture de « Sabotsy 16 sy Alahady 17 Mey 2020 »
Publié le 3 mai 2020 12 mai 2020
Sabotsy 02 sy Alahady 03 Mey 2020
SABOTSY 02 SY ALAHADY 03 MEY 2020 « Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina » « Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy amin’ny Ray, dia ny Fanahin’ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin’ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy. Ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara, satria ianareo efa teto amiko hatramin’ny voalohany. » …
Continuer la lecture de « Sabotsy 02 sy Alahady 03 Mey 2020 »
Publié le 26 avril 2020 12 mai 2020
ALAHADY 26 APRILY 2020 Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino » Alahady nisokafan’ny Fiangonana voalohany ao anatin’ny fahamehana ara-pahasalamana. « Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona manambara izany sy nanoratra izany; ary fantatsika fa marina ny fanambarany » (Jaona 21:24) Izao alahady izao no nivondronan’ny mpianakavin’ny finoana am-bavaka indray eto anivon’ny trano Fiangonana, ao anatin’ny vanim-potoan’ny fahamehana ara-pahasalamana, …
Continuer la lecture de « Alahady 26 Aprily 2020 »
Publié le 4 avril 2020 7 mai 2020
Alahady 05 Aprily 2020
ALAHADY 05 APRILY 2020 Alahady Fandraisana ary Alahadin’ny Sampan-drofia » Vavolombelon’ny Fitsanganan’ny Tompo ny Mino« . « Vavolombelon’ny Fahefan’ny Tompo Ny Mino » Marka 11 :1-11. « Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriany dia samy niantso hoe: Hosana! Isaorana anie Izay avy amin’ny anaran’i Jehovah! » (Marka 11:9) Alahady voalohany amin’ity volana aprily izao ary …
Continuer la lecture de « Alahady 05 Aprily 2020 »
ALAHADY 29 MARSA 2020 Alahady fahadimy amin’ny Karemy sy fahatsiarovana ny tolo-panafahana tamin’ny 1947 « Raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny. » (2 Tantara 7:14) Manonona …
Continuer la lecture de « Alahady 29 Marsa 2020 »
Alahady 23 Febroary 2020
ALAHADY 23 FEBROARY 2020 – “Mahatoky ny Teny vavolombelon’ny Tompo” « Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin’ny fitoeran’andriana, dia nanao fanekena teo anatrehan’i Jehovah hanaraka Azy sy hitandrina ny lalàny sy ny teni-vavolombelony ary ny didiny amin’ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra … » (2 Mpanjaka 23:3) Niantomboka tamin’ny 9 ora ny fotoana. RAHARIJAONA Solofonirina Mpitandrina no …
Continuer la lecture de « Alahady 23 Febroary 2020 »